ငြိမ်းချမ်း| November 9, 2012 | Hits:5,660
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment ကောင်ကင် November 9, 2012 - 5:24 pm	“ရာမူးက ဖမ်းမိတဲ့ ဘုရားတဆူကတော့ ဦးဇင်းတို့ ကျောင်းကနေ မာရမာကြီးတွေ ကိုးကွယ်နိုင်အောင်လို့ လွှဲပြောင်းပေးလိုက်တဲ့ ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားကိုဖမ်းမိတယ်တဲ့လား??????????????